Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha lokulinganisa uxinzelelo lwegazi kwi-Apple Watch | Ndisuka mac
Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha lokulinganisa uxinzelelo lwegazi kwi-Apple Watch
Andazi ukuba mangaphi amaxesha senditshilo ukuba iApple Watch yeyam, mhlawumbi esona sixhobo silungileyo sophawu lwaseMelika. Oku, ubuncinci ngokwemiqathango yokuguquguquka. Oko kukuthi, imveliso eyasungulwa ngenjongo kwaye yavela yanento entsonkothe ​​ngakumbi kwaye iluncedo ngakumbi. Sihambile ekubeni nakho ukufunda imiyalezo okanye ukuphendula iminxeba ukuya ekubekweni esweni kwaye sindisa ubomi bethu Enkosi kubenzi bayo boluvo. Ke ngoko, bafuna ukuya kwelinye inyathelo kwaye ukwazi ukulinganisa uxinzelelo lwegazi. Ubuncinane yile nto ityhilwa yile patent.
Isicelo esitsha selungelo elilodwa lomenzi wechiza, ipapashiwe Kutshanje bonisa Isixhobo esinxitywayo, esinokudityaniswa neApple Watch, ezinokuthi zikwazi ukujonga uxinzelelo lwegazi lomsebenzisi ngaphandle kwesidingo sazo naziphi na izinto ezongezelelekileyo. Oku kunokuvumela abasebenzisi ukuba balinganise uxinzelelo lwegazi basebenzise iinethiwekhi ezingathathi hlangothi kunye nedatha ye-seismocardiogram, ngaphandle kwesidingo soxinzelelo lwegazi. Kuyamangalisa!
Un IsiqendwanaUyazi, ungafumana uluvo lokuba ingathetha ntoni xa le nkqubo iphunyezwe kakuhle? Ngamanye amagama, cinga okomzuzwana ukuba, njengase-United States, sinxibelelene noogqirha bethu ngamaqonga edijithali. Iziphumo zale milinganiselo zilayishwa ngokuzenzekelayo kwaye okoko kungekho zindaba, ziyagcinwa. Kodwa ukuba kukho nasiphi na isitenxo, isilumkiso singagxuma siye kugqirha onokujonga kwakhona yonke imbali kwaye enze isigqibo sokuthintela. Uthintelo, eligama lomlingo kuninzi lobomi bethu, kodwa kwezempilo kuthatha ukubaluleka ngakumbi.
Isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza, elinesihloko esithi "Iintanethi ezinokuchazwa kunye noqikelelo lwexinzelelo lwegazi ngaphandle kwekhafu«. Jonga ukusetyenziswa kwenethiwekhi ye-neural ukuqikelela uxinzelelo lwegazi usebenzisa idatha ye-seismocardiogram. Ngokungafaniyo ne-electrocardiogram, exhomekeke kwimiqondiso yombane yokujonga ukubetha kwentliziyo, isismocardiogram ilinganisa ukungcangcazela okuncinci okubangelwa yintliziyo.
Kukho izixhobo ze seismocardiogram zincinci ngokwaneleyo ukuba zinokuthathwa njengeziphathekayo. Nangona ezi nkqubo zibuthathaka zibekwa kwindawo yesternum yomsebenzisi ukulinganisa ukungcangcazela okuncinci kuye okanye kufutshane nentliziyo. Indlela iApple enenjongo yokusebenzisa isixhobo esinjalo yayingagutyungelwanga kwisicelo selungelo elilodwa.
Kwisicelo kukhankanyiwe ukuba amanqanaba emisebenzi yento enye okanye engaphezulu yeefilitha zenethiwekhi yokuqala ye-neural inokumiselwa. Bala ukubaluleka kokucoca ulwelo ngalunye okanye nangaphezulu kwinethiwekhi yokuqala ye-neural ngokusekwe kumanqanaba omsebenzi wezo zihluzo. Ke inethiwekhi yesibini ye-neural iya kwakhiwa ngokuguqula eyokuqala. Ngale ndlela, idatha yesibini efunyenweyo ingahlalutywa. Kuya kuthatha ithuba kuthungelwano oluthenwe ngokungathathi hlangothi ngokwamkela i-seismocardiogram njengegalelo. Inethiwekhi ye-neural Ungasebenzisa idatha ukuqikelela uxinzelelo lwegazi.
Ngekhe sakubona esi sixhobo kwintengiso okanye sinakho
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto sithetha ngamalungelo abenzi kwaye ngenxa yoko kusenokwenzeka ukuba asisokuze siyibone le fowuni kwintengiso. Ngapha koko, inethuba elihle lokuba xa siyibona, kuya kusithatha iminyaka emininzi ukubabona. Ngaphandle kokuba iApple ifuna ukukhawulezisa inkqubo ngokukhawuleza, endikuthandabuzayo ngendlela, ikakhulu kuba umbono sele uneminyaka embalwa ubudala. Kodwa ngokungazisi kwifom yesicelo kunye nendawo apho esi sixhobo siza kudityaniswa khona neApple Watch, kundenza ndicinge ukuba baseneziphelo ezibotshiweyo.
Ndiyathemba ukuba bayayifumana, kuba ndiyicinga nyani loo nto eyona nto ibalulekileyo esinayo yimpilo kwaye kufuneka siyikhathalele. Ngaphandle kwayo ngekhe sikwazi ukwenza ezinye izinto kwaye ndibhekisa kuvavanyo lwento eyenzekayo kwihlabathi liphela ngenxa yobhubhane obangelwe yiCoronavirus. Ngokusebenza ngokungafaniyo kwe-Apple Watch, inkqubela phambili kwezonyango inokufezekiswa, ubuncinci kwicandelo lemilinganiselo nganye, ihlala ikhumbula, ewe, ukuba ukutolikwa kwazo kufuneka kwenziwe ziingcali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha lokulinganisa uxinzelelo lwegazi kwi-Apple Watch
Utshintshe njani ubhubhane kwindlela osebenza ngayo kuthotho lweentsomi
Abasebenzi baseApple eCarlifonia bagonyelwe i-COVID-19 yinkampani